Ny hetsika RPG gothic tsara indrindra niaraka tamin'i Castlevania: Symphony of the Night | Androidsis
Castlevania: Symphony of the Night, ny lalao eo anelanelan'ny lalao izay niavian'ny teny hoe Metroidvania
Misy lalao sy lalao, ary avy eo misy Castlevania: Symphony of the Night, izay tamin'ny androny dia namorona ny teny Metroidvania ary izany dia nanome aingam-panahy lalao am-polony hatramin'ny nahatongavan'ilay tany am-boalohany taona maro lasa izay tao amin'ny Nintendo.
Ary amin'ny Android, amin'ny fomba premium, dia manao zavatra tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra antenaintsika amin'ity sehatra hack 'n slash lehibe ity. Ny zavakanto pixer eto mandray an-tsehatra afovoany ho an'ny fampisehoana an-tsary ary ny lafiny teknika izay ohatra ho an'ny maro hafa, ary izay tsy mahalala matetika ny fomba hifandraisana amin'ilay lalao gameplay izay manery antsika hahay tena amin'ny fifehezana ilay maherifontsika.
1 Ny lalao mampiavaka ny andiany Castlevania amin'ny findainao
2 Fanandramana natolotry Castlevania: Symphony of the Night
3 Asa kanto eo am-pelatananao
Ny lalao mampiavaka ny andiany Castlevania amin'ny findainao
Nanomboka tamin'ny fotoana voalohany Castlevania: Ny Symphony of the Night dia efa mahasarika antsika amin'ny fomba mahavariana feon-kira ary raha ny fanazavana, dia mampatahotra miaraka amina kalitao amin'ny feo azo ankafizina amin'ny finday farany misy ireo lafiny stereo ireo.
Aorian'ireo segondra voalohany mandentika anao tanteraka amin'ilay zavatra iainanao izay miandry anao dia hoantsoinao ilay maherifonao Alucard amin'ny alàlan'ny Castle an'i Dracula amin'ny lalao filalaovana asa kilalao mahazatra izay hiatrehanao fahavalo an-jatony avy amin'ny lalina maizina indrindra any ambanin'ny tany.
Raha miteny isika miatrika an-jatony Izany no izy, satria raha mijanona ianao dia ho hitanao ny fisehoan'izy ireo tsirairay mandra-pandringany ny efijery. Midika izany fa tsy maintsy afindrao ny borikinao, raha tsy te-hankafy ilay traikefa nahafinaritra izay misy ny kapoka isan-karazany ananantsika ianao, ny fitsambikinana ary ireo fahaiza-manao mahery vaika izay handalovan'i Alucard amin'ny galeria feno bibikely feno helika.
Fanandramana natolotry Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night mampiditra fanaraha-maso mifanaraka amin'ny ankehitriny ary ahafahantsika mandroso amin'ny alàlan'ny efitrano samihafa, izay adika tena tsara ary izay tsirairay avy dia mety ho ohatra amin'ny zavatra hatao amin'ny ambaratonga sary amin'ny lalao finday.
Manana an'i Alucard miaraka amin'ireo fanovana manokana nataony ary miaraka amina fanaraha-maso mahery vaika. Ny zava-drehetra dia ny fanaovana ny hetsika ataonao mba hankafizanao izay mampiavaka an'i Konami lehibe foana: Lalao video mampiankin-doha amin'ny filalaovana lalao. Eto izy dia nanaparitaka ny heriny rehetra ho sangan'asa amin'ny lalao video amin'ny findainao Android.
Alucard dia hisondrotra ary izany dia hahafahany mampiditra fahaiza-manao vaovao ary lasa matanjaka kokoa. Misy teboka mitahiry, mba hahafahantsika manohy mizaha ny tranon'ny Dracula Sefo tsy manam-paharoa nalaina tamin'ny nofy ratsy indrindra. Fifantohana amin'izy ireo, satria manaja izay tena "boss final" foana izy ireo. Iray amin'ireo olona tian'ny olona hatrehana ary lasa io fotoana mampiavaka ny lalao io.
Asa kanto eo am-pelatananao
Castlevania: Symphony of the Night dia nadika tamin'ny fiteny maromaro, noho izany anananao amin'ny Espaniôla handrava ny tantarany rehetra. Tontolo maizina no miandry anao hankafy ny iray amin'ireo traikefa tsara indrindra amin'ny lalao filalaovana andraikitra tahaka ny tsy misy hafa ary mampifangaro karazana isan-karazany toy ny sehatra. Ny fomba fahitana azy manokana ary amin'ny kanto pixel dia mampiseho tanjaka lehibe.
Ara-teknika dia angano izany ary amin'ny fahitana izany ode natao ho zavakanto pixel. Anisan'ireo pitsopitsony izay misarika ny saintsika ny sasany amin'ireo singa hita maso toy ny any aoriana miaraka amin'ireo sosona samihafa izay miteraka fiatraikany lalina. Na ireo sefo farany natao ho toy ny nalaina tao amin'ny HP Lovecraft ary tena sarotra izany. Isika koa dia sisa tavela amin'ny halehiben'ny feon-kira ary manome azy io kalitao io mba hamoronana iray amin'ireo traikefa filokana tsara indrindra azonao atao izao amin'ny findainao.
Castlevania: tonga ny Symphony amin'ny alina hanehoana ny toetran'ny Metroidvania voalohany. Raha mbola tsy nanandrana nanandrana ny lohateny Konami ianao dia manana izany amin'ny fomba premium ary mandoa vola tokana amin'ny findainao. Afaka manome toky anao izahay fa tsy hanenenanao izany. Ary eny an-dalana, raha hijanona ao an-trano ianao dia aza hadino izany lisitra goavan'ny lalao multiplayer an-tserasera.
Konami dia nandefa an'io Castlevania io tamin'ny fomba lehibe mba hahafantaran'ireo izay tsy zatra ity andiany ity ny hakantony amin'ny zavakanto pixel sy ny lalao mahafinaritra sy lalina misy ny filalaovana andraikitra. Tena ilaina amin'ny gamer rehetra.
Ny feon-kira kanto misy azy
Grandiosity amin'ny lafiny teknika sy sary
Ny vokatr'ireo sosona samihafa amin'ny sary afara
Kapoka isan-karazany sy fifaneraserana lehibe
Tsy manam-paharoa ireo lehibenao farany
Tsy afaka manova bokotra amin'ny tanana mba hamindrana azy ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Castlevania: Symphony of the Night, ny lalao eo anelanelan'ny lalao izay niavian'ny teny hoe Metroidvania
Tsy io irery no lalao Castlevania. Misy freemium hafa na antsoina hoe freemium fa tsy nandeha n'aiza n'aiza. Toy izany koa no azo tratrarina amin'ny apkpure.
Ahoana ny fanadiovana ny findainao mba hanesorana ireo soritry ny coronavirus ary hamela azy ho madio
Fetsy sy fampiharana mahasoa ho an'ny Android